ယူနိုက်တက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့စဉ်က ဘယ်သူ့ကို ပစ်မှတ်ထား ကစားခဲ့သလဲ ၊ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ကစားတိုင်း စိတ်ပျက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် စတား #ဒီနေး - Khit Style
ယူနိုက်တက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့စဉ်က ဘယ်သူ့ကို ပစ်မှတ်ထား ကစားခဲ့သလဲ ၊ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ကစားတိုင်း စိတ်ပျက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် စတား #ဒီနေး
Posted on April 5, 2020 August 8, 2020 by soeminnaing
ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ထရွိုင်း ဒီနေး က ဖေဖော်ဝါရီလ အကုန် လောက်မှာ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့စဉ် တုန်းက သူတို့ တွေဟာ ပြိုင်ဖက် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဖရက်ဒ် ကို အထူး ပစ်မှတ်ထား ကစား ခဲ့ ကြကြောင်း ဝန်ခံ ဖွင့်ဟ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း တို့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ လ 23 ရက်နေ့ တုန်းက အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင် အသင်း က3–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် သွင်းဂိုး တွေကို ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ၊ အန်သိုနီ မာရှယ် နဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် တို့က သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
ဒီပွဲ မှာတော့ 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် တို့ ရှုံးနိမ့် နေခဲ့တဲ့ အချိန် ပွဲချိန် 52 မိနစ် မှာ ဒီနေး ဟာ ခြေပဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ ပေမယ့် VAR မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် စစ်ဆေး ကြည့်ရာ ပစ်ဒဏ်ဘော ဖြစ်နေ ခဲ့တဲ့ အတွက် ပယ်ဖျက် ခဲ့တာ ကြောင့် ဝက်ဖို့ဒ် တို့ နစ်နာ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အခုတော့ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ထရွိုင်း ဒီနေး က အကယ်လို့ သူတို့ တွေသာ ဒီ ရာသီ ယူနိုက်တက် မှာ အထူး ခြေစွမ်းကောင်း တွေကို ပြသ နေခဲ့တဲ့ ဖရက်ဒ် အား ဖြတ်ကျော် နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ပွဲစဉ် ကို ကောင်းကောင်း အဆုံးသတ် နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ခဲ့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အဲ့ဒီ ပွဲစဉ်မှာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် က အရမ်းကောင်း ခဲ့တယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်မိ ပါတယ် ။ သူဟာ ဘယ်လောက် အထိ ကောင်းမွန် သလဲ ဆိုတာ တွေကို ပြသရင်း ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ကို ကွင်း အတွင်း အံ့အားသင့် စေနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ဘောလုံး တွေကို တလွဲ ပေးတတ်တာ များခဲ့ ပေမယ့် ပြန်လည် ရယူ လိုစိတ် ရှိတဲ့ ဖရက်ဒ်ကို ကျွန်တော် ကတော့ နှစ်သက် ပါတယ် ”
” တစ်ခါတလေ ကစားသမား တစ်ယောက် ဘောလုံး ဆုံးရှုံး သွားတဲ့ အခါ တွေမှာ သူတို့ တွေဟာ ခံစစ် ၊ ဘယ် ၊ ညာ တောင်ပံ ခံစစ် နေရာ တွေဆီ ပြေးသွား တတ်ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဖရက်ဒ် ကတော့ ‘ ဟုတ်ပီ ၊ ဒီ တစ်ခါ ငါ လွဲခဲ့ပြီ ။ နောက် တစ်ခါ တွေ့ကြ သေးတာပေါ့ ‘ ဆိုပြီး တွေးတဲ့ ကစားသမား မျိုးပါ
” ကျွန်တော် တို့ဟာ သူ့ကို ပစ်မှတ် ထားပြီး ကစား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါက မန်နေဂျာ ပြောလို့ တော့ မဟုတ် ပါဘူး ။ ကွင်းထဲက သူ့ရဲ့ အနေအထား တွေကြောင့် ပါပဲ ။ သူဟာ ပွဲစဉ် အတွင်း2–3ကြိမ်လောက် ဘောလုံး ပေးတာ လွဲမှားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့က သူ့ကို ဘောလုံး ကိုင်စေရင်း ‘ သူ နောက်ထပ် အမှား လုပ်ပါစေ ၊ ငါတို့ အဲ့တာ ကို အခွင့်ကောင်း ယူလိုက် ကြမယ် ‘ ဆိုပြီး ပစ်မှတ် ထားခဲ့ ကြ ပါတယ် ”
” ပထမပိုင်း အတွင်း မှာ ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု4၊5ကြိမ် အထိလောက် ရယူ နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဖရက်ဒ် ကို ဘောလုံးကိုင် ကစား စေလို ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူဟာ ဘောလုံး ရတိုင်း3–4ချက်လောက် ထိ ပြီးမှ ဘောလုံး ပေးပို့ တတ်တဲ့ အကျင့်မျိုး ရှိတယ်လေ ။ သူဟာ ဘောလုံး နှစ်ချက် ထိပြီး ပေးပို့ တတ်သူ မဟုတ် ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ ပွဲစဉ် က3–0ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ် တမ်းတော့ အဲ့လောက် အထိ ဖြစ်သွား စရာ အကြောင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် ပထမပိုင်း ပေါ့ ။ ဒါဟာ4နှစ် ဆက်တိုက် ဖြစ်နေခဲ့ ရတာပါ ။ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ အခါတိုင်း ‘ ငါတို့ ဘာ့ကြောင့် ရှုံး ရတာလဲ ? ‘ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို အမြဲ ထုတ်ဖြစ် ပါတယ် ”
” ဒါဟာ မနှစ်မြို့ ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အရာ တစ်ခု တော့ မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ဟာ သူတို့ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ အခါ တိုင်းမှာ ပိုကောင်း ကြတဲ့ အချိန် ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု တွေနဲ့ ပိုကောင်း ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပွဲစဉ် ပြီးတိုင်း ‘ ငါတို့ ရှုံးပြီ ၊ ဒါ ဘာဖြစ် လို့လဲ ? ‘ ဆိုတာ ကျွန်တော် အမြဲ တွေးတောရ ပါတယ် ” လို့ ဒီနေး က ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။